धर्मले बन्दि बनाएको सोचाईको प्रतिफल हो खादा प्रतिबन्ध : मोहन तामाङ – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
मंसिर २९, २०७५ १०:१४ मा प्रकाशित
बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्दिजम के हो थाहा छैन?? बुद्ध को थिए थाहा छैन ? मात्रै थाहा थाहा छ कि बुद्ध नेपालको हो । त्यो पनि सकेसम्म भन्न नपरोस् भन्दै हिड्छन किनकी उसको शिर बुद्धको पहिचानले उच्च हुदैन उसको शिर उच्च हुन सबैले पशुपतिमा गएर जय शिवजी भन्नै पर्छ।। उसलाइ थाहा छैन धर्म के हो भन्ने कुरा उसलाई त मात्रै थाहा छ कि ब्रतबन्ध गरेर झुन्ड्याइ दिएको धागोको मन्त्र मात्रै ।। उसले वास्तविक जन्न पनि खोज्दैन किनकि उसलाइ बिहान बेलुका जय शिवजी जय महादेव भन्दै मन्त्र उच्चारण गर्दै ठिक्क छ।। त्यो मन्त्र भित्रको धार्मिक रहस्य भन्दाअरु बुझ्नै खोज्दैन मात्रै मन्त्र जपेर स्वर्ग पुगिन्छ कि भन्ने आशा पलाए पुग्छ।।
ती झुन्ड्याइएका धागोको परिधिभित्र सोचाइ परिरहेको कुरा कसले भनिदिओस विचारालाई। भनोस पनि कसरी उसले वास्ता नै गर्दैन ।।
कहिकतै फाट्टफुट्ट स्थापना भएका गुम्बालाइ कर लगाउनु पर्छ भन्दै तातिन्छन हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु । उसलाई थाहा छैन गुम्बा पनि एक शैक्षिक संस्था हो जहाँ बुद्धको ज्ञान गुण मात्रै सिकाउदैन भन्ने कुरा ।। उसले त झन सोच्नै सक्दैन किनकि कहिलेकाही कृष्ण मन्दिरमा जादा त्यही कृष्णको भजन गाउने र नाच्ने मात्रै देखेको गुम्बामा त्यहि होला भन्ने सोच्छन ।। त्यो सोच्नु पनि स्वाभाविक नै हो किनकी पहिला आफुले देखेको वा विश्वास गरेको कुरामा अरु नया कुरा सितिमिति सोच्दै सोच्दैन यो एउटा दिमागी प्रक्रिया नै हो ।।गुम्बामा जीवन जिउने कला सिकाउछ , जिन्दगीलाई माया गर्न सिकाउछ भन्नू त भालुलाइ पुरण सुनाए जस्तै हो उसलाई किनकी उसको दिमागमा छुट्टै छाप बसेको छ र अर्कै विश्वास गरेको छ गुम्बाबाट।।
अनि त्यसैको पछि लागेर केही पत्रकार लेख्छन नेपालमा गुम्बाले समाज बिगार्दै छ किनकि त्यहाभित्र केके धन्दा चलाउछन रे। उसले हो वा छ भन्दैन वाक्यको पछाडि रे थप्दै लेख्छन तर पढ्नेले रे को वास्त गर्दैनन किनकी अगाडिको वाक्यले गुम्बाप्रतिको उसको दिमागमा अर्कै चित्र बनिसकेको हुन्छ।। उसलाइ थाहा छ गुम्बामा बस्नेले बाबाले जसरी गाजा भाङ खादैनन भनेर तर मन्दिरमा गाजा भाङ खाएर लाम्पसार परेर बसेका बाबाहरुको दिनचर्या दिनहुँ नियालेका उनलाइ के विश्वास लाग्नु झिलिमिल्ली गुम्बा भित्र त्यस्तो क्रियाकलाप हुदैन भन्ने कुराको।।अनि एउटा बुद्धिजीवी भनौदालाइ ल्याएर अन्तर्वार्ता लिन्छन र
विचारा !!ती बुद्धिजीवी जसले त्यही बुद्धिलाई धेरथोर तोडमोड गर्दै पेट पाल्नेले पनि भन्छन “अ हो यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ ” उसलाई थाहा छैन गुम्बा भित्र केकस्ता क्रियाकलाप हुन्छ भनेर ।। साच्चै भन्ने हो भने गुम्बामा गएर कुनै दिन शान्तिको लागि भनेर एउटा बति बालेर गुम्बालाइ एक रुपैया चढाएकै छैन । अझै गफ छाड्छन त्यहा विदेशी मात्रै आउछन त्यहा पक्कै बम बारुद ल्याउनु पर्छ ।। उसले सोच्दैनन त्यहा गुम्बामा आउने पर्यटकले सरकारलाई कर तिरेका छन अनि ती सानो गुम्बाले गर्दा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन हुँदै छ भन्ने कुरा ।।उसले मात्रै सोच्छन विदेशी आउने भएसी त्यहा केही छ मानौ त्यहा हिरा छ अनि विदेशी आउदै खन्दै लागिदै छ ।। अनि त्यही पेटपाल्न बोलेका बुद्धिजीवीको कुरा सुनेर एकदुइ जनाले सामाजिक सञ्जालमा बिरोध सुरु गर्छन अनि दुइतिन जना अझै थपिन्छन । उनिहरुलाइ थाहा छैनन वास्तविक के हो भन्ने कुरा किनकी उनिहरुको सोचाइलाइ पनि बन्दी बनाइएको छ।।
एकदुइ जना पत्रकार अनि एकदुइ जना पेटपालुवा नामक बुद्धिजीवीको कुरा सुन्दै सरकार अघोषित खादा प्रतिबन्ध गर्ने तरखरमा लाग्छ अनि आआफ्नो मातहतका कार्यलय संस्था संगठनलाई निर्देशन दिन्छ अबदेखि बुद्धवाला खादाको प्रयोग नगर्ने मानौ त्यो खादाको प्रयोगले अब नेपाल ध्वस्त हुँदै छ। त्यही कुरालाई आत्मसात गर्दै लुम्बिनी विकास कोषले विश्व बौद्ध सम्मेलनमा ढाकाको खादा ल्याए बुद्दअंकित ल्याएनन किनकी निर्देशन यस्तो दियो कि मानौं बुद्ध अंकित खादा प्रयोग गर्दा अब लुम्बिनी चिनमा पुगिन्छ तर कसैले सोचेनन कि एउटा खादाको प्रयोग गर्दैमा के नै हुन्छ र ? भन्ने कुरा किनकि त्यहा पनि सोचाइलाइ बन्दी बनाइएकै छ।।
कहिलेकाही एउटा नायिकालाइ खादा आफ्नो पहिरन बनाउन लगाउछ किनकी उनिहरुको सोचाइ खादालाइ मुल्यहिन बनाउनैमा छ।यदि त्यस्तो गरेन भने अब जय भोले,शिवजी भन्ने पहेँलोवाला कपडा कसैले किन्ने नै भएन । अझै हिन्दुहरुले पनि पुरानो जय भोलेवाला प्रयोग नै गरेन अब झन उसको मनमा आक्रोश जन्मिन्छ हटाउनै पर्छ भन्ने किनकि उसको दिमागमा अब हिन्दु बुद्धिष्ट हुने भए भन्ने सोचिदै छ।।
फेरि कहिलेकाही बुद्धको मुर्ति माथि घोडा चढेर फोटो खिच्दै फेसबुकमा अपलोड गर्छन मानौ नेपोलियले युद्ध जिते झै उसले पनि संसार जित्यो ।। उसले आत्मनुशासन त तोड्यो तोड्यो अझै झन चरण दिमागी बन्दिमा पसिदै गैरहेको छ भन्ने कुरा कसले भनोस। हुन त अरुलाई
पनि थाहा छैन यो एउटा धार्मिक दिमागी बन्दी हो भन्ने कुरा।। किनकि अरुले पनि धार्मिक परिधिभन्दा बाहिर गएर सोच्न भ्याएकै छैनन।।
यी सबै घट्नहरुको पछाडि कारण एउटै हो धर्मले बनाइएको संकीर्ण सोचाइ अथवा सोचाइको बन्दी।।
साच्चै नै एउटा खुल्ला हृदयले सोच्ने हो भने खादा के नै हो र? एउटा कपडामा केही बुद्धले प्रयोग गरेका अक्षरहरु छन अनि हामिले कसैलाई सम्मान गर्दा या औपचारिक कार्यक्रममा प्रयोग गर्छौ ।।यो बुद्दिस्टको मात्रै प्रयोग गर्ने पनि भनेकै छैन न यसको प्रयोगले कसैलाइ पुरै बौद्ध शिक्षा दिमागभरी आउँछ न त हिन्दु कृश्चियनमा भएका ज्ञान पुरै हटाउछ । आखिर त्यो एउटा कपडामा कसैले डिजाइन गरेर प्रयोग गर्दा नेपाल डुब्छ?? नेपाल कंगाल बन्छ??
हुनेवाला केही पनि छैन लुम्बिनी चिनमा पुग्दैन भारतले लादा पनि लादैन अनि सबै हिन्दु मुस्लिम कृश्चियन बुद्धिस्ट पनि बन्दैनन मात्रै हाम्रो सोचाइ एउटा धर्मको परिधिभित्र परेको मात्रै हो ।
हामिले कुनैपनि कुराप्रती हेर्ने दृष्टिकोण कुनै कुराको प्रभावमा परेर तय गर्नु हुदैन ।। जब कसैको परिधिभित्र परिन्छ तब वास्तविक बुझ्ने मौका नै पाउदैन।। तसर्थ हामिले हाम्रो सोचाइलाइ धर्मको जेलभित्र बाट बाहिर निकाल्नु आवश्यक छ।। अनि मात्रै यो समाजमा सबैले सबैको सम्मान गर्छ ।।
बहुसंस्कृतिक , बहुभाषिक, बहुधार्मिक देशमा आजको २१ औ शताब्दीमा पनि हामी धार्मिक सोचाइको बन्दी बनेर बस्ने हो भने अबको नेपाली समाजमा सद्भावना कम र विभेदको आक्रोश बढ्नेछ र समाज अशान्ति तिर जान सकिन्छ तसर्थ आफ्नो संस्कार, संस्कृत ,भाषा , धर्म ,चालचलन ,रितिरिवाज जोगाउनु पर्छ यो हामी सबैको जिम्मेवारी हो तर अरु कसैलाइ होच्याएर या सानो बनाएर वा विभेद गरेर भन्ने सोचाइ राखेर हैन सबैकोलाइ सम्मान गर्दै आफ्नो जोगाउन लाग्नु पर्दछ। कहिलेकाही धार्मिक बन्दिको परिधिभित्र परेको सोचाइ चिन्तन लाई खुल्ला हृदयले अर्को पाटोबाट पनि हेर्ने/सोच्ने गर्नुपर्दछ।।
अनि मात्रै अनेकतामा एकता नेपालिको विशेषता भन्ने भनाइले सार्थकता पाउनेछ।।।